RW Rooble, oo magacaabay guddi muhiim u ah doorashooyinka | KEYDMEDIA ONLINE
Dhawaan Keydmedia Online, waxa ay daabacday warbixin ku saabsn, sida uu Farmaajo, u takooray, isla-markaana uu darka siyaasadda uga dheereeyay dumarka Soomaaliyeed, hayeeshee, Ra’iisul Wasaaraha xil-gaarsiinta ayaa u muuqda in uu qaaday waddo middaas ka duwan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa magacaabay guddi xaqijinaya qoondada haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyhiin kuraasta Baarlamaanka 11-aad, kaas oo la filayo in ay dhawaan doorashadiisu ka billaabato dalka.
“Si loo hubiyo matalaadda haweenka ee goleyaasha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa Ra'iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu magacaabay guddi ka kooban 13 xubnood oo qaabilsan u ololeynta iyo xaqiijinta qoondada haweenka ugu yaraan 30% ee labada aqal ee BFS”. Aya lagu yiri war ka soo baxay xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Sida ku cad qodobka Shanaad ee heshiiskii Golaha Wadatashiga Qaranku ku gaaray Muqdisho, 27 May 2021, Goluhu wuxuu isku raacay, in qoondada haweenka ee 30%, la illaaliyo, iyadoo la tixraacayo heshiiskii 17 September 2020, lagu saxiixay Caasimada.
Dhawaan Keydmedia Online, waxa ay daabacday warbixin ku saabsn, sida uu Farmaajo, u takooray, isla-markaana uu darka siyaasadda uga dheereeyay dumarka Soomaaliyeed, hayeeshee, Ra’iisul Wasaaraha xil-gaarsiinta ayaa u muuqda in uu qaaday waddo middaad ka duwan.
Qaar ka mid ah guddigaan ka kooban 13 xubnood, waxaa ku jira Maamooyin, si weyn uga qeyb qaatay in dalku ka badbaado gacan kalitalis bishii April, sida Marwo, Caasho Geelle Diiriye, oo dhowr jeer warbaahinta ka weerartay Laanta Fulinta (Xukuumadda).
Haweenka Soomaaliyeed waxay taariikh u leeyihiin ka mid noqoshada dadaallada dhexdhexaadinta, nabadeynta iyo dib u dhiska dalka. Kaliya maahan inay doorkaan ka ciyaareen, sidoo kale waxay qeyb ka ahaayeen hirgalinta ajandaha UN Women, Peace and Security (WPS).
Hoos ka aqriso magacyada xubnaha guddiga xaqijinaya qoondada haweenka.